Tag: isaac | Martech Zone
Firemail: Email Marketing na-enweghị Onye Na-enye Ọrụ Email
Sunday, December 13, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Abụ m onye na-akwado ndị na-ahụ maka ọrụ email na ngwaahịa na ọrụ dị egwu ha na-enye. Ikekwe nke kachasị mkpa bụ nsogbu mwepụta nke nwere ike ibilite mgbe ị na-ezipụ ọtụtụ email. Na nnukwu esemokwu dị n’etiti ndị na-enye ọrụ ịntanetị (ISPs) na ndị na-enye ọrụ Email (ESP), oge ụfọdụ azụmahịa na-etinye n’etiti. N'ụzọ na-emegide onwe gị, ịrụ ọrụ na ESP na enweghị ikike ọ bụla nwere ike ibute nsogbu mgbapụta, kwa. Ọtụtụ ISP na-egbochi email naanị n'ihi
N'ụtụtụ a, enwetara m email site na ndị folks na ExactTarget nke kwuru na a kwalitela ndị ahịa ndị ahịa ha ịgụnye njikwa ikpe. Nke a abughi obere ọnụ ụzọ ndị ahịa ọ bụla! ExactTarget 3sixty bụ netwọọdụ mmekọrịta ndị ahịa na - arụ ọrụ zuru oke nke jikọtara ya na njikwa ikpe, ndụmọdụ ngwaahịa, ọbá akwụkwọ ọzụzụ na ọgbakọ maka ndị ahịa iji nyere ibe ha aka. M ruru ExactTarget taa ma ị nwere ike ịsị na ha bụ ụzụ na